सांगीतिक जगतमा छुट्टै पहिचान छ गायिका तृष्णा गुरुङको । पछिल्लो समय ‘कोल्याब ब्यान्ड’मा आबद्ध उनी आफैं गीत लेख्छिन्, संगीत दिन्छिन् । उनीसँग साप्ताहिकको लागि सिर्जना दुवाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
संगीतमा कसरी आकर्षित हुनु भयो ?
घरमा बुबाले बाँसुरी बजाइरहनु हुन्थ्यो । दाइहरू साथीलाई घरमा बोलाई गितार बजाउँदै ‘ज्यामअप’ गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूको गीत सुनेर मलाइ पनि गाउने रहर हुन थाल्यो । २ कक्षा पढ्दादेखि नै गाउन र बजाउन रुचाउँथेँ । अलिक ठूलो भएपछि क्यासेट बजाएर गीत गाउन खोज्थेँ । दाइले गितार बजाएको हेरिरहन्थे । उहाँहरू बाहिर जानु भएपछि गितारमा उहाँहरूले जस्तै गरी बजाउन खोज्थेँ । गितार र गायनप्रतिको रुचि देखेर दाइले पनि सिकाउन थाल्नुभयो ।
सानोमा के बन्ने सपना थियो ?
कक्षामा कोही डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स वा वकिल बन्ने लक्ष्य राख्थे । म भने सानैदेखि गायिका बन्छु भन्थेँ । त्यतिबेला सबै मलाई हेरेर हाँस्थे ।
पहिलो गीत कसरी रेकर्ड भयो ?
एसएलसीपछि काठमाडौंमा साथीसँग घुम्दा–घुम्दै रिबेल क्रियसनमा पुग्यौं । त्यसबेला स्याडोज् ब्याण्डका ‘११ः३० बसन’ संग भेट भयो । मलाई पनि संगीतमा रुची छ भने पछि लामै कुरा भयो । त्यहाँ गितार देखेँ । बजाउन मन लाग्यो । मैले गितार लिएर गीत गाउन थाले पछि उहाँले आफ्नो सोलो एल्बममा सँगै गाउन अफर गर्नुभयो । यसरी पहिलो गीत ‘दैव जानोस्’ रिलिज भयो । रक बेसको गीत धेरैले रुचाए । पछि कसरी निरन्तरता दिने आइडिया पनि भएन र पढाइलाइ पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर गायन ग्याप गरेँ ।
तपाईंलाई चिनाएको गीत ‘खनी हो यामु’ कसरी सिर्जना भयो ?
यो गीत दाइ मनिष गुरुङ र मेरो कम्पोजिसन हो । दुई कक्षामा पढ्दा दाइले गितारको प्लगिङमा ‘खनी हो यामु ए कान्छी’ भनेर बजाउनुहुन्थ्यो । म भने ‘खनी हो यामु ए कान्छा’ भनेर गाउँथे । दाइ अहिले युके आर्मीमा हुनुहुन्छ । मलाई भने त्यो भर्सन एकदम मनपर्ने । पछि त्यसमा शब्द थपेर कम्पोज गरँें । गीतलाई पूरा गरेर रिलिज गर्ने पुरानै सोच हो । समाजशाश्त्रमा मास्टर्स गर्दै गर्दा गीत पूरा गरेर रिलिज गरेँ । धेरैले रुचाउनुभयो र यसैले पहिचान पनि दियो । यसपछि मलाई कन्सर्टको अफर आउन थाल्यो । देश–विदेशमा कन्सर्टको लागि भ्याइ–नभ्याइ नै भयो ।
तपाईंको ट्रेण्ड बेग्लै र मौलिक मानिन्छ ? कसरी बन्छन् त्यस्ता गीत ?
बजारको ट्रेण्डअनुसार चल्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ । तर के पनि सोच्छु भने अहिले आधुनिक, रक, वेस्टर्न गीत त सबैले गाउँछन् । सबैले त्यही गीत ‘फलो’ गर्दा नयाँ जेनेरेसनले ‘टिपिकल’ नेपाली गीत सुन्न पाउँदैनन् । सबैको टेस्ट उस्तै पनि हुँदैन । म रक गीत सुन्दै हुर्कें र त्यस्तै शैलीका गीत मनपर्थ्यो । समय र उमेरले व्यक्तिको सोचाइ र टेस्ट फरक हुँदै जाँदोरहेछ । मलाई अहिले झ्याङ झ्याङ झुङ झुङ गीत सुन्नै मन पर्दैन । ‘सफ्ट’ पाराका नेपाली मौलिक शब्द भएका गीत गाउन र सुन्न मन पर्न थालेको छ । त्यसैले म चलिरहेको ट्रेण्डको पछाडि लागेकी छैन । मलाई जे मनपर्छ, त्यही लेख्छु । संगीत दिन्छु र मनदेखि गाउने प्रयास गर्छु ।
तपाईंको गीतमा गाउँ भल्किन्छ । गाउँचाहिँ कत्तिको पुग्नुहुन्छ ?
हरेक समय गाउँघरलाई सम्झिन्छु । गाउँ शान्त लाग्छ । एक्लै बस्दा दिमागमा कति कुरा खेल्छन्, त्यसलाई गीत बनाउँछु । गाउँको भाषा, शब्द कोर्दा अनि गितारमा अभ्यास गर्दा आनन्द लाग्छ । गाउँ पनि पुगिरहन्छु । अहिले त गाउँघरबाट पनि धेरै कार्यक्रमको निम्ता आउन थालेको छ । ‘यो त हाम्रो मौलिक भाका गाउने गायिका हो’ पनि भन्छन्, खुशी लाग्छ ।
‘कभर सङ’ गाउन छोड्नुभयो ?
मैले ‘माया पिरती’ बोलको कभर सङमात्रै गाएको छु ।
पढाइ बीचैमा छोड्नुको कारण संगीत नै हो ?
मास्टर्स गर्दै गर्दा गीत हिट भयो । धेरै कन्सर्टको अफर आयो । आफूलाई मनपरेको विषयमा लाग्न पाउँदा पढाइमा समय दिन सकिनँ । संगीतलाई दोष दिनु भन्दा पनि मलाई मनपरेको विषयमा काम गर्ने मौका मिल्यो ।
घरवाट कतिको सहयोग छ ?
ममीले त ‘तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नू’ भन्नु हुन्थ्यो । तर, बुबाको भने पढाइ राम्रो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता थियो । ‘खनी हो यामु’ गीत निस्केपछि बुबाले पनि ‘ओहो राम्रो गायौ’ भनेर स्याबासी दिनुभयो ।
संगीतविना त म बाँच्न सक्दिनँ होला । मेरो बाँच्ने आधार नै संगीत हो ।
आफ्नो स्वभावचाहिँ कस्तो लाग्छ ?
म कमै बोल्थेँ । तर काम गर्दै जाँदा बोल्ने भएँ । यस क्षेत्रमा बोलेन भने त पछि परिन्छ नि ! संगीतले नै परिवर्तन ल्यायो । तर पनि सबैसँग छिटै खुल्न सक्दिनँ । रिजर्भ नै छु ।
‘सोलो करियर’बाट किन ब्याण्डमा आबद्ध हुनुभयो ?
डेढ वर्षअघि सिक्किममा भएको इभेन्टका लागि ब्यान्डको आवश्यकता पर्यो । एकजना ड्रमर साथीलाई ब्यान्डका लागि यो–यो खालको बाजा बजाउने व्यक्ति चाहियो भनेँ । त्यसपछि विभिन्न ब्यान्डका उत्कृष्ट म्युजिसियनहरु लिएर ‘कोल्याब ब्यान्ड’ बनाइयो । ब्यान्डमा हामी ६ जना छौं । लाइभ ब्यान्डमा गाउँदाको मज्जा ट्रयाकमा गाउँदा हुँदैन ।
ब्याण्डमा तपाईंबाहेक अरू त्यति परिचित हुनुहुन्न नि ?
डेढ वर्ष त भयो ब्यान्ड खोलेको । यहीबीच धेरै ठाउँमा ब्याण्डको कन्सर्ट भइसकेको छ । ‘कोल्याब ब्यान्ड’ भन्नासाथै ‘ए तृष्णा गुरुङ’को भन्ने त भएको छ । तर चिनिन्छ बिस्तारै । मलाई पनि परिचय बनाउन कति वर्ष लाग्यो । रातारात हिट भएकोे त होइन नि ।
ब्याण्डमा पनि तपाईंकै पाराका गीत गाउनुहुन्छ ?
मुख्यतः गीतको कम्पोजिसन म आफैँ गर्छु । वाद्यवादनमा साथीहरूले हेर्नुहुन्छ । कतिपय कुरा सल्लाहअनुसार परिवर्तन गर्छौँ ।
तपाईंका फ्यान कुन वर्ग र उमेरका छन् ?
मेरो गीत लोक बेसमा फ्युजन भएकाले होला, सबै जेनेरेसनले रुचाएको पाउँछु । कार्यक्रममा जाँदा टिनएजरदेखि बुढाबुढी पनि रमाएको पाउँछु ।
पहिलो पारिश्रमिक कति पाउनु भएको थियो र त्यसले के गर्नुभयो ?
जीवनमा पहिलो पटक गीत गाएर २५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएकी थिएँ । त्यो पैसासाटेर परिवारका सबैजनालाई र मिल्ने साथीहरूलाई ५०÷२०को नोटमा आफ्नो नाम र दस्तखत गरेर बाडेँ ।
लकडाउनअघि कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ?
सोलो र ब्याण्डवाट सांगीतिक कार्यक्रममा व्यस्त नै थिएँ । गाउँ, शहर, रेस्टुराँदेखि विदेशका कार्यक्रम निकै थिए । एल्बमको लागि नयाँ गीत पनि रेकर्डको लागि अभ्यास गरिरहेका थियौं ।
विदेशमा ब्याण्डको अफरचाहिँ कत्तिको आउँछ ?
विदेशमा बढीजसो सोलो नै अफर आउँछ । ब्याण्डलाई बोलाउँदा बजेट बढी हुने हुँदा कहिँकतैमात्रै ब्याण्डलाई बोलाउँछन् । अष्ट्रलिया, युके, युरोप, कोरिया, सिंगापुर, हङ्गकङ्गलगायतका देशमा एक्लै नै गएकी हुँ । देशभित्र भने ब्याण्डमा पनि उत्तिकै व्यस्त हुन्छु ।
अहिले के योजना बनाइरहनुभएको छ ?
होम रेकर्डिङ्ग गरेर भए पनि गीत रेकर्ड गर्न सुरु गरेकी छु । हप्ता–दश दिनभित्र नया“ गीत रिलिज गर्ने योजना छ ।